Jamaica na-amachibido iwu njem ọhụrụ na mba Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica na-amachibido iwu njem ọhụrụ na mba Africa
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Jamaica ejirila ngwa ngwa tinye mmachi na ndị njem si n'ọtụtụ mba Africa, n'ihi mpụta nke ụdị nchegbu ọhụrụ maka SARS-CoV-2, nke akpọrọ B.1.1.529.
Mba ndị a bụ:
• Eswatini (onye bụbu Swaziland)
Ndị na-abụghị mba
Ndị niile na-abụghị ụmụ amaala ma ọ bụ ndị bi na Jamaica na-adịgide adịgide na ndị gara na mba ndị edepụtara n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga agaghị ekwe ka ha bata na Jamaica.
All ụmụ amaala na-adịgide adịgide bi nke Jamaica Ndị gara mba ndị edepụtara n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga ka a ga-ahapụ ịbanye, agbanyeghị, a ga-edobe ikike iche iche steeti na-elekọta maka ihe na-erughị ụbọchị iri na anọ.
ỌDỊGHỊ UZỌ GA-EME IHE NDỊ GA-EME?
Onye isi oche nke World Tourism Network Dr. Peter Tarlow, onye bụkwa onye ụkọchukwu maka Ụlọ Akwụkwọ College, Texas Police Department, na ọkachamara na njem njem & nchekwa nchekwa na nchekwa, nwere ndụmọdụ maka ụwa nke njem nlegharị anya: Nke a abụghị oge egwu, ma nke a bụ oge iji ụbụrụ gị.
Ndụmọdụ a na-abịa ụbọchị abụọ ka ụwa tetara ụdị ọzọ nke Coronavirus, mara dị ka Omicron, ma ọ bụ teknụzụ dị iche iche B.1.1.529.